मनको भारी कसरी हलुका हुन्छ ? - विविध - नारी
मनको भारी कसरी हलुका हुन्छ ?
मनको मैला जबसम्म स्वच्छ र निर्मल पार्न सकिँदैन तबसम्म अन्तरकुन्तरमा रहेको विषयले मनमा ठाउँ ओगट्छन् । अत: ती नकारात्मक भावनाहरूलाई टाढा फ्याँकेर आन्तरिक यन्त्रलाई जसरी हुन्छ सफा–सुग्घर गर्नु मनको भारीपन हलुका गर्नु हो । पूर्वजहरूले भनेका छन्–जसले आफ्नो मन जित्न सक्छ उसले जगत् जित्न सक्छ ।
आफ्ना दु:ख र वेदना अरूलाई सुनाएर मनको व्यथा हलुका गरिन्छ । यो पनि एकप्रकारको साधन हो ।
सीत चिकित्सा : सङ्गीत चिकित्सा मानसिक भार, तनाव कम गर्ने सरल पद्धति हो । सङ्गीतले मन र मस्तिष्कलाई एकाग्र तुल्याउन सहयोग गर्छ । सङ्गीत सारा शरीरलाई शिथिल गरेर दु:ख–पीडा बाहिर निकाल्न कारगर सिद्ध भएको छ । सङ्गीतमा ध्यान पनि गरिन्छ । ध्यानले व्यक्तिको शरीरमा अनौठो तरङ्ग उत्पन्न गर्छ । सङ्गीतको सम्बन्ध आध्यात्मिक ज्ञानसँग छ । सङ्गीतले सद्विचार उत्पन्न भएर मन प्रफुल्ल हुन्छ । यसले मानसिक स्वास्थ्यलाई बल प्रदान गर्छ ।
रोदन चिकित्सा : रोदन चिकित्साले मनोविकार हटाउँछ । मनोविकारलाई मनमा गुम्साएर राख्नुभन्दा रुनु शरीरका लागि उत्तम हुन्छ । आँखाबाट आँसु बगाउनु मानसिक स्वास्थ्यको सूचक पनि हो । रुँदा मन–मस्तिष्कलाई शान्तिको आभास हुन्छ । न रोदन न हाँसो न सङ्गीत केही पाउन नसक्नु नै जीवन अपाङ्ग बनाउनु हो ।
हास्य चिकित्सा : मनोवैज्ञानिकहरूले यसलाई शारीरिक एवं मानसिक रोगका लागि प्राकृतिक औषधीकै रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । जब व्यक्ति दिल खोलेर हाँस्छ तब उसको शरीरका रक्तकोषिकाहरू प्रफुल्ल हुन्छन् । मन प्रसन्न भएपछि प्रत्येक रक्तकणहरूमा नेचुरल किलर नामक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति वृद्धि हुन्छ । यसले इम्युन सेल्सहरूको संख्यात्मक वृद्धि मात्र गर्दैन कुनै भयानक रोग लाग्नबाट बचाउँछ ।
भौंतारिएको चित्तलाई हाँसेर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हाँस्नु मन–मस्तिष्कलाई उर्वराशक्ति प्रदान गर्नु हो । हाँस्दा मनमा प्रसन्नता संचार हुन्छ । यतिबेला मस्तिष्कमा इन्डोर्फिन्स र इन्केफालिन्सजस्ता जैविक रसायनहरू सक्रिय हुन्छन् । त्यसैले हाँसो पोसिलो औषधी हो । हाँसेर दु:ख मात्र निवारण हुने होइन–हाँस्ने व्यक्तिको चित्तवृत्तिसमेत स्वच्छ र सुन्दर हुन्छ । हाँसोले मनको अनावश्यक चिन्ता हटाउँछ । यसले कार्यमा एकाग्रता प्रदान गर्न पनि उत्तिकै सहयोग गर्छ ।
व्यस्त जीवन : जति सकिन्छ उति व्यस्त रहनुपर्छ । काममा रुचि राख्नु भनेको स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण सञ्जीवनी हो, जसले ‘म रोगी हुँ’ म वृद्ध हुँ’ भनेर सोची हिँड्छ उसले केही पनि गर्न सक्दैन । जो घरायसी कामदेखि आयआर्जनसम्म सक्रिय हुन्छ, उसको मनमा सन्तोष हुन्छ । प्रसन्नताले भोजनमा रुचि बढ्छ अनि राम्रो निद्रा पनि लाग्छ ।
निष्कर्ष : मानवजीवनमा मनको ठूलो महत्व छ । भनाइ नै छ– मन राम्रो भए पो मति राम्रो हुन्छ ? तर मनलाई नियन्त्रण गर्न निकै कठिन छ । मन नियन्त्रण गर्ने विभिन्न उपायमध्ये योग र व्यायाम पनि प्रमुख हुन् । शरीर र मनको तादात्म्य हुन्छ । शरीर र मनलाई एकाकार गर्नु नै योग हो । व्यायामले पनि शरीरको मैला र पसिना निकालेर व्यक्तिलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउँछ ।
भाद्र ११, २०७२ - वृद्धावस्थामा सहजीकरण कसरी ?